निर्वाचन क्षेत्रको दौडमा निस्किएका सांसद खड्काको चासो कोरोनाको असर र विकास - नयाँपुल अनलाइन डटकम
प्रकाशित मिति : Wednesday, November 11, 2020 nayapulonline
दोलखा जिल्लाका प्रदेशसभा सांसद बिशाल खड्का आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कनु भएको छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कोरोनाको असर र विकासको अवस्थाबारे बुझ्न दोलखा पुग्नु भएका सांसद खड्काले मंगलबार र बुधबार तामाकोशि गाउँपालिका वडा नंं ४, ५ ,६ र ७ को भ्रमण सम्पन्न गर्नु भएको छ । त्याँहा कोरोनाको असर र विकास निर्माणको अवस्थामा बारेमा स्थानियबासिहरु सँग सांसद खड्काले छलफल तथा संवाद गर्नुभएको छ । यस क्रममा उहाँले आफु निर्वाचित भएको स्थानमा कोरोनाको असर र संक्रमितहरुको अवस्थाको बारेमा समेत चासो राख्नु भएको थियो । सांसद खड्का आफैपनि कोरोना भाईरसबाट संक्रमित भई संक्रमणमुक्त भइसकेको र यो बिचमा स्थानियहरुसँग लामो संवाद टुटेको भन्दै आफु निर्वाचित भएको क्षेत्रमा पुग्नु भएको हो ।
सांसद खड्का भन्नु हुन्छ– “महामारीका बिचमा पनि सुरक्षीत भएर हामी जनतामाझ जानुपर्छ र समाजलाई समृद्ध बनाउने विकास निर्माण लगायतका कामहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।” उहाँले अहिले वडावडामा पुगेर जनगुनासोहरु सुन्ने कामपनि गरीरहनु भएको छ । साथै निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कामहरु कसरी अगाडि बढिरहेका छन ? स्थानियबासीहरुको चाहाना के छ ? भन्ने बिषयमा दोहोरो संवाद गर्ने क्रममा सांसद खड्का अहिले वडा नंं ७ मा हुनुहुन्छ । उहाँले समग्र विकासको बारेमा दोलखाली जनताहरुसँग भालाकुसारी गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभएको छ ।
सांसद खड्काले तामाकोशि गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित महेन्द्र उच्च माद्यामीक बिद्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन समेत गर्नु भएको छ । उक्त बिद्यलय भवनको एसियाली बिकास बैंक ले निर्माण सम्म्पन्न गरी मंगलबार बिद्यालयलाई चाबि हस्तान्तरण गरेको हो ।
महेन्द्र उच्च माद्यामीक बिद्यालयको नवनिर्मित भवन
यसै क्रमममा उहाँले तामाकोशि गाउँपालिका वडा नं. ४ का नेकपाका स्थानिय नेता कार्यकतासँग
भालाकुसारी समेत गर्नु भएको छ । उहाँले मंगलवार वडा नं. ५ स्थित किर्ने–रिठ्ठाबोट सडकको अनुगमन समेत गर्नुभएको थियो । उक्त सडकको कालोपत्रे र स्तरोन्नती गर्न सांसद खड्काले पहल गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ । त्यस्तै उहाँले वडा नम्बर ७ को गुम्बा सडक लगायत विकास निर्माणको अवस्थामा बारेमा समेत चासो राख्नुभएको छ । सांसद खड्कालाई टोलटोलमा स्थानीयले फुलमालाले स्वागत गरेका थिए ।
चाडपर्व पछि दोलखामा कोरोना माहामारी र विकास निर्माणको अवस्था बारेमा स्थानियसँग भालाकुसारी गर्न सांसद खड्का आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कनु भएको हो । दोलखा जिल्लामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल आफुले गरीरहेको र आगामी दिनमा पनि सक्रियतापुर्वक विकास निर्माणको काममा केन्द्रित हुने उहाँको भनाई छ । भ्रमणमा सांसद खड्का सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दोलखाका जिल्ला सचिवालय सदस्य शम्भु प्रसाद फुयाल, उपेन्द्र प्रसाद अधिकारी, युवानेता सहदेव बुढाथोकी लगायतको सहभागीता रहेको छ ।
भौतिक पुर्बाधारको बिकासमा जोड दिदै, हतुवागढि गाउँपालिका